न्यूजील्याण्डमा श्रृ‌खलाबद्ध बन्दुक हमला, क्रिकेट टिमद्वारा खेल रद्द
एजेन्सी, १ चैत । न्यूजिल्याण्डको क्राइस्टचर्चमा बन्दुक हमला भएको छ । शहरको दुईवटा मस्जिदमा भएको बन्दुक हमलामा कयौंको हताहत भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
आक्रमणकारीले फेसबुक लाइभ गर्दै हमला गरेका छन् । बन्दुकधारीको हमलामा परी ३० जनाको ज्यान गएको र ५० भन्दा बढी घाइते भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले खबर लेखेका छन् ।
न्यूजिल्याण्डका प्रहरी कमिसार माइक बुशका अनुसार उक्त हमला संलग्न भएको आशंका चार मानिसलाई हिरासतमा लिइएको छ, जसमध्ये तीन पुरुष र एक महिला रहेका छन् । अहिलेसम्म सम्भावित खतरा कम भएको बारे प्रशासनले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
उनका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरुबाट महत्वपूर्ण काजगात फेला परेका छन् । उनले भने, ‘यो एकदमै सुनियोजित हमला हो । घटनामा अत्यधिक हतियारको प्रयोग गरिएको थियो । आज कोही मस्जिद जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ नजानुहोस् । हामीले अर्को सूचना नदिएसम्मको घरका ढोकाहरु बन्द राख्नुहोस् ।
अहिलेसम्म प्रहरीले यो आतंककारी हमला हो कि होइन भन्नेबारे केही स्पष्ट पारेको छैन ।
डबलिन एयरपोर्ट प्रशासनका अनुसार हलमलापछि डबलिन र क्राइस्टचर्चबीचका सबै उडान रद्द गरिएका छन् ।
न्यूजिल्याण्ड क्रिकेट टिमले बंगलादेश क्रिकेट खेल रद्द भएको जनाएको छ । उनीहरुले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘हमलामा प्रभावित मानिस र परिवारप्रति हाम्रो समवेदना छ । हामीले बंगलादेश क्रिकेट यात्रा रद्द गरेका छौं । दुवै देशका क्रिकेट बोर्डहरुले आपसी सहमतिमा यस्तो निर्णय गरेको हो । टिम र सहयोगी कर्मचारीहरु सबै सुरक्षित छौं ।’
हमलाको बेला बंगलादेशी क्रिकेटरहरु नमाज पढ्न मस्जिद गएका थिए । उनीहरु सबै सुरक्षित रहेका छन् ।
बन्दुकधारीले हमला गरिरहेको बेला बंगलादेशी क्रिकेटरहरु त्यहीँ थिए । नमाज पढ्न सुरु गर्नै लाग्दा मस्जिदभित्र गोली चलेको थियो । कतिपयले बंगलादेशी क्रिकेटरकै अगाडि प्राण त्यागेका थिए । त्यहाँबाट निस्किएका खेलाडीहरु १० मिनेटभित्रै होटेल पुगेका थिए ।
उनीहरुले सबै खेलाडी सुरक्षित भए पनि मानसिक तनावग्रस्त अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
घटनामा स्कुले बच्चाहरु सबै सुरक्षित रहेको र सबैलाई शान्त रहन र यो भयानक घटनाक्रमलाई पार लगाउन सबैले सहकार्य गर्न स्थानीय प्रशासनले अपिल गरेको छ ।
को हुन् हमलाकारी ?
न्यूजिल्याण्ड प्रहरीका अनुसार, हमलाकारी अष्ट्रेलियाली युवक २८ वर्षीय ब्रेन्टन टैरेन्ट हुन् । डेली मेलमा प्रकाशित खबरका अनुसार उसले मस्जिदमा पसेर फेसबुक लाइभ गर्दै हमला सुरु गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोका अनुसार ती हमलाकारीले मस्जिदमा सुतिरहेका मानिसमाथि निरन्तर हमला गरिरहेको देखिन्छ ।
अहिले फेसबुक र ट्वीटरमा उक्त भिडियोलाई ब्लक गरिएको छ ।
आइजिपी खनालले भेटे हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने
कम्युनिष्ट नेता नै राजा महाराजाजस्ता हुन थालेः प्रचण्ड
कम्युनिस्ट शासन चाँडै अन्त्य हुने देउवाको ठेकुवा
पूर्वप्रम भट्टराई भन्छन्- अधिकारका लागि दलित समुदाय एकीकृत हुुनुपर्छ
आफ्नै श्रीमान मार्न साढे ४ लाखको सुपारी !
कांग्रेस गुटबन्दीमा लाग्दा कम्युनिष्टहरुलाई फाइदा भयो: नेता पौडेल
सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिएका छौं: उपप्रधानमन्त्री यादव
नेपाल एकदिवसीय वरीयतामा १ स्थान तल झर्‍यो
नेपाल प्रहरीमा करिब ४ हजारका लागि जागिर खुल्यो (सूचनासहित)
सत्तामा पुगेपछि जनतासँग गरेका वाचा बिर्सने प्रवृत्ति बढ्यो : अध्यक्ष प्रचण्ड
मौसम खबरः देशभर मौसम बदली, केही स्थानमा वर्षा
लिभरपुलका चेम्बरलेनले क्लबसँग सम्झौता थप गरे
आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइदैं
नेयमारलाई अनुबन्ध गर्न रियल मड्रिडका प्रतिनिधि फ्रान्स पुगे
गोलरक्षक केलोर नाभास पिएसजी जाने
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ३५ निर्णय
रोहितको कप्तानीमा यू-१९ एसिया कपका लागि अन्तिम टोलीको घोषणा (नामावलीसहित)